डा केसीलाई काठमाडौं लैजान प्रहरीको मृत्यु भएको प्रचार
साउन ३, २०७५| प्रकाशित १५:०२
जुम्ला– डा गोविन्द केसीलाई ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेल’ गर्न प्रहरीको मृत्यु भएको हल्ला फैलाइएको खुलेको छ। अस्पतालको भीड नियन्त्रण गरी डा केसीलाई काठमाडौं पठाउनका लागि झडपमा घाइते भएका प्रहरी जवानको मृत्यु भएको भनेर हल्ला गरिएको थियो।
जुम्लाका प्रहरी प्रमुख डा तपन दाहालले भीड नियन्त्रणको उद्देश्यले आफूहरुले नै प्रहरीको मृत्यु भएको हल्ला फैलाएको बताए। माइकिङ मार्फत प्रहरीले प्रहरी जवानको मृत्यु भइसकेको र अब आफूहरु फायरिङ गर्न बाध्य हुने भन्दै प्रचार गरेको थियो।
त्यस्तै, प्रहरीले डा केसी र उनका सहयोगीहरुलाई पनि झडपमा प्रहरीको मृत्यु भएको बताएको थियो। सोही आधारमा डा केसी थप झडप नहोस् भनेर काठमाडौं जान तयार भएका थिए। उनलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ।
झडपमा घाइते भएका प्रहरी जवानको उपचार भइरहेको डिएसपी दाहालले बताए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी र स्थानीयले डा केसीलाई काठमाडौं लैजानबाट रोक्ने क्रममा झडप भएको थियो।
प्रहरी र अस्पताल स्रोतबाट प्राप्त सूचना अनुसार यसअघि गलत समाचार प्रकाशित भएकोमा पाठक तथा सम्बन्धित पक्षसँग गम्भीर क्षमायाचना गर्दछौं – सम्पादक
Well we can't blame police officers their responsibility is to control that situation. May be according to situation they find this method best
यस्मा सम्पादकले माफी माग्नु पर्दैन, एक सरकारि जिम्मेवार त्यस्मा नि प्रहरी प्रमुखले यस्तो झुटो कुरा माइकिङ गर्न मिल्छ??? ति घाइते प्रहरीको परिवारमा कस्तो परिस्थिति भयो मनन गर्नु भाछ? प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्छ!
harsh bahadur shahi
दिलीप जंग थापा
ठुलो माहान काम गरेछ नेकपा वायु सेवा निगमको सरकारले अस्पतालमा गोली वर्षाएर धिक्कार छ जनताले आशा गरेर वहुमत दिएको जनता दवाउन नभई जनताको सेवा गर्न हो
मापसे गरी सवारी चलाए अब ट्राफिक परीक्षा दिनुपर्ने, पास नभए लाइसेन्स नपाइने